पार्टीलाई सशक्त बनाउने अभियान विवादित हुनुहुन्न » छलफल
पार्टीलाई सशक्त बनाउने अभियान विवादित हुनुहुन्न
काठमाडौँ । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को तेस्रो स्थायी कमिटीकाे पाँच महिनापछि हिजो दिउँसो १ बजे केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डले २२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा ऐतिहासिक पार्टी एकता, संगठनात्मक एकीकरण, सरकार सञ्चालनका नौ महिना, राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति, राजनीतिक दलहरुको भूमिका, केन्द्रीय सचिवालयहरुको निर्णयहरुको अनुमोदन, पार्टीका आन्तरिक जीवनलाई व्यवस्थित बनाउने सम्बन्धमा र आगामी कार्यभार शीर्षकमा चर्चा गरिएको छ । हिजोको बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गरी छलफल गर्न अर्को बैठक भोली पुस २ गते सोमबार बिहान ११ः०० बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बस्ने निर्णय गरेको छ ।नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीच पार्टी एकता भए पनि लामो समयसम्म स्थायी कमिटी बैठक बस्न नसक्दा नेतृत्वको आलोचना भएको थियो भने पार्टी एकीकरण प्रक्रियासमेत लम्बिएको थियो ।२२ मंसिरमा बालुवाटारमा केन्द्रीय सचिवालय बैठक डाकेर अपमानपूर्वक पर्खाइएको भन्दै चार नेताले बहिष्कार गरेपछि हिजोका लागि बैठक बोलाएको थियो । चार नेता बाहिरिएपछि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित सचिवालयको बहुमत सदस्यको बैठकले हिजोका लागि स्थायी समिति बैठकको मिति तय गरेको थियो । हिजो बिहान नेकपाको सचिवालय बैठकसमेत बसेको थियो ।
तलसम्म पुग्न नसकेको एकता
मुलुक यतिबेला ऐतिहासिक चरणबाट अगाडि बढ्दै छ । समाजवादको लक्ष्य अगाडि सारेर पार्टी र सरकार अगाडि बढिरहेको छ । समाजवादको लक्ष्य प्राप्त गर्न कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व नभई सम्भव छैन । कम्युनिस्ट पार्टी अहिले अभूतपूर्व प्रगतिको अवस्थामा छ । खासगरी दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी (तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र) एकताबद्ध भएपछि मुलुकमा अत्यन्त महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ । एकता ऐतिहासिक र दूरगामी घोषणाका रूपमा नेपाली जनतासामु आएको छ । तर, एकता भएको यति लामो समयसम्म पनि तलसम्म अझै पार्टी एकीकरण हुन सकेको छैन । जनवर्गीय संगठनहरूको एकता पनि हुन सकिराखेको छैन । एकताबद्ध हुन र तलसम्मका पार्टी निकायलाई एकताबद्ध गर्नकै लागि पनि पार्टी कमिटीका बैठकहरू नियमित रूपमा बस्नैपर्ने हुन्छ । तर त्यो भइरहेको छैन ।
कम्युनिस्ट पार्टी नीति, विधि, सिद्धान्त र प्रक्रियाको आधारमा चल्ने गर्छ । कम्युनिस्ट विज्ञानसम्मत चल्ने पार्टी पनि हो । यदि, नियमबद्ध ढंगले पार्टी चल्न सकेन भने कम्युनिस्ट पार्टी वैज्ञानिक पार्टीका रूपमा स्थापित हुन सक्दैन । अहिले ऐतिहासिक अभिभारा नेकपाको काँधमा छ, यस्तो गहन अभिभारा बोकेर अगाडि बढिरहेको कम्युनिस्ट पार्टीले आफूलाई नियमबद्ध, नीतिबद्ध र सिद्धान्तबद्ध गर्न सक्नुपर्छ । तबमात्रै पार्टी लक्ष्यतर्फ अगाडि बढ्न सक्छ । सिंगो देश र जनतालाई पनि लक्ष्यतर्फ अगाडि बढाउन सक्छ । तर, बैठकहरू नै नियमित हुन सकेनन, भने पार्टीको लक्ष्यतर्फको यात्रा अवरुद्ध हुन्छ । त्यसैले पार्टीका नियमित बैठकको अत्यन्त ठूलो महत्व हुने गर्छ ।
गतिशील, एकताबद्ध र सुदृढ पार्टी
नेतृत्वले चालेका कदमले धेरै कुराको संकेत गर्छ । कम्युनिस्ट पार्टीका कुनै पनि तहका बैठक विधानले नै यति–यति समयमा गर्नु भनेर तोकेको हुन्छ । आवश्यकताबमोजिम बैठक बस्ने, तोकिएको कमिटीमा पनि मोटामोटी यति समयमा यति पटक बैठक गर्ने भन्ने कुरा समझदारीमा कायम गरिएको हुन्छ । त्यो समझदारीलाई सबैले पालना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । अनिमात्रै पार्टी वैचारिक, राजनीतिक, सैद्धान्तिक र संगठनात्मक रूपमा पनि अगाडि बढ्छ । कम्युनिस्ट पार्टी भनेको वैचारिक, राजनीतिक, सैद्धान्तिक, दार्शनिक र संगठनात्मक पार्टी पनि हो । यसका सबै आयामलाई नेतृत्वले ध्यानमा राखेर हिँड्न सक्यो भने मात्रै वास्तविक रूपमा आधुनिक सर्वहारा वर्गीय कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण हुन सक्दछ ।
अहिले नेकपा एकीकृत भएको छ । तर, यो पार्टीलाई संगठनात्मक रूपमा तलसम्म एकीकरण गर्न बाँकी छ । पार्टीका हातखुट्टाका रूपमा रहेका तमाम जनवर्गीय संगठन एकीकरण भइसकेका छैनन् । त्यस कारण पार्टी निर्माणको कामलाई वैचारिक र संगठनात्मक दुवै हिसाबले सञ्चालन गर्न बाँकी छ । वैचारिक र संगठनात्मक ढंगले पार्टी निर्माण गर्ने अथवा बहुआयामिक ढंगले पार्टी निर्माण गर्ने काम गरेर मात्रै नेपाली सर्वहारा श्रमिक पार्टीको अत्यन्त शक्तिशाली अग्रदस्ताका रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई निर्माण गर्न सकिन्छ । अहिले यस्तो पार्टीको अपेक्षा जनताले गरेका छन्, कार्यकर्ता र शुभचिन्तकको अपेक्षा बनेको छ र सिंगो राष्ट्रको अपेक्षा बनेको छ ।
कार्यदिशा समयसापेक्ष भएन
नेकपालाई एकीकरण गर्ने बेलामा नै तलका कमिटी र वर्गीय संगठन विघटन गर्ने काम गलत भयो, त्यस्तो गर्नु हुँदैनथ्यो । विघटन गर्नै पर्ने आवश्यकता थियो भने निश्चित समयमा एकता गर्ने सुनिश्चितता कायम गर्नुपथ्र्यो । एकीकरणको सन्दर्भमा जुन किसिमको कार्यनीति लिइयो, त्यो कार्यनीति पनि समयसापेक्ष हुन सकेन । व्यवहारले अहिले त्यही बताइरहेको छ । एकीकरण अनिवार्य आवश्यकता र ऐतिहासिक अनिवार्यता बनेको छ । तर, अझै एकीकरण भएको छैन । अझै एकताका लागि लामो समय लाग्ने देखिएको छ । त्यस कारण हामीले कहाँ कमजोरी ग¥यौँ भन्ने कुरालाई नेताहरूले पत्ता लगाएर चाँडोभन्दा चाँडो पार्टीलाई एकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि स्थायी कमिटीमा छलफल गरी पार्टीको तल्लो तहसम्मको एकीकरण र जनवर्गीय संगठनको एकीकरणलाई पनि सम्पादन गर्नुपर्छ । साथै कुनै पनि विषयको निर्णय गर्दा स्थायी कमिटीबाट गरिनु नै बुद्धिमतापूर्ण, दूरदर्शी र एकताको भावना अनुकूल हुनेछ ।
वर्तमानको समीक्षा आवश्यक
तीन तहको सरकार बनेको लामो समय भइसकेको छ । यस अवधिमा पार्टीका कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्तअनुरूप नेता अगाडि बढ्न सके कि सकेनन्, पार्टीले निर्वाचनमा अगाडि सारेको घोषणापत्रअनुरूप सरकार र पार्टी अगाडि बढ्न सक्यो कि सकेन, राष्ट्रलाई अगाडि बढाउन सक्यो कि सकेन, पार्टीको घोषणापत्रअनुरूप नेतृत्वले नीति र कार्यक्रमहरू अगाडि सार्न सक्यो कि सकेन, वा घोषणापत्रअनुरूप बजेटको बाँडफाँड भयो कि भएन, यी सम्पूर्ण विषयको राम्रो ढंगले समीक्षा हुन जरुरी छ । आवधिक समीक्षा नगरी तथा उपलब्धि र कमी–कमजोरीलाई पर्गेल्ने काम नगरी पार्टी र सरकार अग्रगतितर्फ बढ्न सक्दैन । यो कम्युनिस्ट पार्टीको वैज्ञानिक नियम हो । कम्युनिस्ट पार्टीले हरेक कुरामा एक अवधिभर अगाडि बढ्ने र फेरि पछाडि फर्केर हेर्ने, विगतको समीक्षा गर्ने, त्यसबाट शिक्षा लिने काम गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । सरकारले तीनवटै तहमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउने र बजेट निर्धारण गर्ने काम गरेर कार्यान्वनय गर्दै अगाडि बढीरहेको छ । तर कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कतिपय समस्या र चुनौती पनि देखा परिरहेका छन । यी सबैको समीक्षा गरेर अगाडि बढ्न जरूरी छ । समाजवादको लक्ष्यतर्फ अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा त्यसतर्फ जाने काम भइरहेको छ कि छैन ? भन्ने बारेमा पनि गहन समीक्षा आवश्यक छ । समाजवादको बाटोलाई सुनिश्चित गरेर सोहीअनुरूपका नीति, योजना, कार्यक्रम अगाडि सारेर मात्रै अग्रगतितर्फ जान सकिन्छ । त्यसतर्फको समीक्षा पनि अहिलेको आवश्यकता हो ।
यात्रु ठग्नेहरू कारबाहीमा
काठमाडौं । ऐन, नियममा नचल्ने ट्याक्सी चालकको चालक अनुमतिपत्र निलम्बन गर्ने विशेष अभियानअन्तर्गत ट्राफिक प्रहरीले कारबाही तीव्र पारेको छ । यससँगै करिब एक साताको अवधिमा मात्रै ३०० बढी ट्याक्सी चालकलाई प्रहरीले कारबाही गरेको छ । लगातार पाँच पटकसम्म कारबाही परेमा चालक अनुमतिपत्र ६ महिनाका लागि निलम्बन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्थाअनुसार सो अभियान थालिएको प्रहरीले जनाएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले यातायात व्यवस्था विभागसँगको समन्वयमा मङ्सिर २० गतेबाट नियमविपरीत चल्ने ट्याक्सी चालकको चालक अनुमतिपत्र निलम्बन गर्ने योजनाअनुसार अभिलेख राख्न सुरु गरेको हो । सो अभियानअन्तर्गत अहिलेसम्म ३०० बढी चालक कारबाहीमा परेको महाशाखाले जानकारी दिएको छ । सबैभन्दा बढी खाली भएर पनि यात्रु चढाउन नमान्ने १८९ जना चालकलाई कारबाही गरिएको छ । यस्तै भाडा मोलमोलाइ गर्ने ९८ जना, मिटर बिगार्ने र प्रयोजनविपरीत प्रयोग गर्ने २० जनालाई कारबाही गरिएको महाशाखाले जानकारी दिएकोे छ । मङ्सिर महिनामा ७६५ ट्याक्सी चालक कारबाहीमा परिसकेको तथ्याङ्क महाशाखाले दिएको छ । निलम्बन भने मङ्सिर २० गतेपछिको कारबाहीमा परेका ट्याक्सी चालकमा मात्र लागू हुनेछ । उनीहरूलाई सादा पोसाकमा खटिएका प्रहरीले पहिचान गरी जरिवाना तिराएर अभिलेख राख्न थालेको छ । अभियानका लागि प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा ५० भन्दा बढी सादा पोसाकका ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरिएको छ । पहिचान हुनेबित्तिकै उनीहरूलाई महाशाखामा ल्याइने, रु. तीन हजार जरिवाना तिराइने र उनीहरूको अभिलेख राखिनेछ । लगातार पाँच पटकसम्म रु. तीन हजारका दरले जरिवाना लाग्ने र त्यसपछि अनुमतिपत्र निलम्बनका लागि यातायात व्यवस्था विभागमा सिफारिस गरिने पनि महाशाखाले जानकारी दिएको छ ।